Red Chair | YOPE
Home \_ Red Chair
RED CHAIR MEETS PHYU PHYU HTWE
RED CHAIR MEETS KAUNG MYAT SAN
သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လို့ Miss လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ မှားပါတယ်ဆိုတဲ့ မေမြတ်နိုး
ကျွန်တော်အပြုံးကြောင့် ဖိုးပြုံးချိုလို့ နာမည်ပြောင်ပေးကြတယ် ဆိုတဲ့ ဇွဲပြည့်
လေးနှစ်ခွဲအရွယ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ပြီး မုန့်စားဖို့ထက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ပဲ ပူဆာခဲ့တယ်
YOPE RED CHAIR MEETS JEWEL
YOPE RED CHAIR MEETS SHWE HTOO( ရွှေထူး)
REDCHAIR MEETS Nan Sandar Hla Tun
YOPE RED CHAIR MEETS NI NI KHIN ZAW
်RED CHAIR MEETS CHAN MYAE OO(PROJECT K)
အောင်မြင်ဖို့အတွက် ရိုးသားရမယ် – ထူးအောင်
Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ သေချာ လေ့လာသင့်တယ်
ကြေးစားအမျိုးသမီး ကာရိုက်တာနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောလာရင် ကျေနပ်တယ်….
RED CHAIR MEETS MELODY
RED CHAIR MEETS ARKAR
RED CHAIR MEETS CHAN YE HTUT
RED CHAIR MEETS NAY MIN EAIN
Yope February 1, 2018
RED CHAIR နဲ့ ဖြူဖြူထွေး ဘာတွေမေးထားလို့ ဘာတွေပြန်ဖြေသွားလဲ.. သိချင်လား.?
Yope December 28, 2017
Yope December 22, 2017
သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လို့ Miss လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ မှားပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့သူလေးက မေမြတ်နိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အတွေးအမြင်တွေက ဘယ်လို ရှိမလဲ ? နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို သူမ ဘယ်လို ဖြေထားလဲ အားပေးကြပါဦးနော်….
Yope December 7, 2017
အဆိုတော် ဇွဲပြည့်က သူ့အပြုံးကြောင့် သူ့ကို ဖိုးပြုံးချိုလို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားတယ်တဲ့။ သူပြောသလို သူ့အပြုံးက တကယ်ချိုရဲ့လား။ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့မေးခွန်းတွေကို သူဘယ်လိုဖြေထားသေးသလဲ။ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv
လေးနှစ်ခွဲအရွယ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ပြီး မုန့်စားဖို့ထက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ပဲ ပူဆာခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ အိစိကွေး YOPE RED CHAIR မေးခွန်းတွေကို ဘာပြန်ဖြေခဲ့သလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
Yope November 23, 2017
Message သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျုဝဲလ် YOPE RED CHAIR မေးခွန်းတွေကို ဘာပြန်ဖြေထားလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
Yope November 16, 2017
လူကောင်းမဖြစ်ချင်တဲ့ ရွှေထူး.. YOPE RED CHAIR ရဲ့ မေးခွန်း ခု ကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေမှာလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
Yope November 2, 2017
ပဉ္စလက်ရွာ ရုပ်သံဇတ်လမ်းထဲက ရေ၀တီ ဆိုတဲ့ ဇတ်ကောင်နေရာမှာ အကောင်းဆုံးသူရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ သူ .. သူကတော့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း ..ဖြစ်ပါတယ်. YOPE RED CHAIR ရဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ သူမ အဖြေ ဘယ်လိုရှိမှာလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com